Hore Ugama Dhicin Dunida! Barcelona Oo Heshiis 10 Sannadood Ah U Bandhigtay Lionel Messi & Qoddobada Yaabka Leh Ee Ku Jira - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaHore Ugama Dhicin Dunida! Barcelona Oo Heshiis 10 Sannadood Ah U Bandhigtay Lionel Messi & Qoddobada Yaabka Leh Ee Ku Jira
Hore Ugama Dhicin Dunida! Barcelona Oo Heshiis 10 Sannadood Ah U Bandhigtay Lionel Messi & Qoddobada Yaabka Leh Ee Ku Jira
April 30, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Lionel Messi ayaa dalab heshiis cusub oo toban sannadood ah ka helay kooxdiisa Barcelona, kaas oo ay doonayso in cimrigiisa ciyaareed oo dhan uu ku qaato Camp Nou oo illaa inta uu duqoomayo uu sii joogo kooxda.
Heshiiskan ayaa waxa ku jira qodob layaableh oo ah in uu mushaharkiisa kala-badh dhimo, haddii uu doonayana uu kaliya u dhaqaaqi karo waddanka Maraykanka oo aanu qaaradda Yurub ku leexan karin.
Lionel Messi oo ah ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda Barcelona, koobabkii ugu badnaana u qaaday, ayaa waxa uu qandaraaskiisa hore ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin waxay Barca ka shaqaynaysaa sidii ay laacibkan usii haysan lahayd.
Kooxda reer Spain oo lagu leeyahay lacag ka badan 1 bilyan oo Euro oo deyn ah, ayaa waxay 33 jirkan u bandhigtay heshiis cusub oo 10 sannadood ah oo uu ku noqonayo ciyaartoygii taariikhda kooxda ugu muddada dheeraa.
Qandaraaska ayaa waxa uu dhigayaa, in Messi uu helo damaanad lacageed oo mushahar ah oo muddo dheer u socota, balse uu isagu dhinaciisa ka xaqiijiyo in uu doonayo in uu waqtigaas kooxda sii joogo iyo in mushaharkiisa uu ugu yaraan kala-badh dhimo.
Wax ka yar laba bilood oo kali ah ayaa ka hadhay heshiiska Messi, waxaana uu xor u noqon doonaa in uu iskaga baxo Camp Nou marka la gaadho waqtigaas, laakiin Barcelona ma doonayso in ay weydo kabtankeeda.
Si kastaba, wargeyska L’Equipe ee kasoo baxa waddanka Faransiiska ayaa horraantii sannadkan qoray, in Lionel Messi uu toddobaadkii mushahar uga qaato Barcelona lacag dhan £2.1 milyan, taas oo sannadkii noqonaysa £108.2 milyan oo Gini.
Haddii uu Lionel Messi ogolaado heshiiskan tobanka sannadood ah, waxa uu Barcelona sii joogi doonaa illaa inta ay da’diisu noqonayso 43 jir.